Zimbabwe: Botswana-Zimbabwe Meeting Advances Regional Integration - allAfrica.com
Both countries have massive deposits of coal and this extraction requires heavy transport and port facilities. Therefore, President Masisi spoke of the need to resuscitate Zimbabwe's southern railway line that that goes through Chicualcuala to Maputo in Mozambique, and there are plans for the link to extend to a new coal port to be built further south of Maputo.
"I wish to add our voice in calling for the unconditional removal of sanctions on Zimbabwe," Masisi said. "We recently made the same call as SADC leaders and we all stand by that announcement."
"There is no doubt that the sanctions on Zimbabwe are a major stumbling block with serious deleterious effect on the country's efforts towards full economic recovery."
A statement issued by the SADC Chairperson, President Hage Geingob, following a consultative meeting of SADC Heads of State and Government in early February, said the Zimbabwe government's efforts to transform the economy were "negatively affected by the illegal sanctions that were imposed on the country since the early 2000s."
SADC leaders expressed solidarity with the government and people of Zimbabwe and called "upon the international community to unconditionally lift all sanctions imposed on the country."
Zimbabwe requested Botswana to consider joining the joint visa agreement for the cross-border conservation area of Kavango-Zambezi (KAZA) where the boundaries of five countries converge in the world's largest Transfrontier Conservation Area (TFCA) - Angola, Botswana, Namibia, Zambia and Zimbabwe.